Dhalinyarada Silence Cry oo Wacdaro Xalay ka Dhigay Shaashadaha – Rasaasa News
Dhalinyarada Silence Cry oo Wacdaro Xalay ka Dhigay Shaashadaha
Mar 7, 2012 Dhalinyarada Silence Cry oo Wacdaro Xalay ka Dhigay Shaashadaha
London, Mar 7, 2012 [ras] – Barnaamij aad u qiimo badan oo ay wadeen Ururka dhalinyarada Silence Cry oo habeenkii xalay ahaa si toos ah looga daawaday Universal TV iyo ESTV.
Ururka dhalinyarad Silence Cry, oo hada lagu magacaabo Freedom of Peace ayaa wacdaro dhigay xalay, kolkii ay sii daayeen barnaamij dhab ah oo dhamaystiran oo ay ka soo duubeen degaanka Somalida Ethiopia [Ogaden region].
Dhalinyarada Silence Cry ayaa magacooda ku badalay Freedom of Peace, ka dib kolkii uu heshiis nabadeed oo taariikhi ah uu dhexmaray dawlada Ethiopia iyo Jabhadihii hore ula dagaalamayey dawlada oo ahaa ONLF iyo UWSLF sanadkii 2010.
Dhalinyarada ayaa waxay fursad u heleen in ay tagaan degaanka Somalida Ethiopia, waxayna booqdeen dhamaan gabalada uu ka kooban yahay degaanka Somalida [ogaden] Ethiopia.
Dhalinyaradan oo ah dhalinyaro aad u jecel in ay caawiyaan caruurta iyo dadka tabaalaysan ee degaanka Somalida Ethiopia, ayaa magacoodu ku soo caan baxay dagaaladii ka dhex jiray Jabhadaha iyo dawlada Ethiopia.
Dhalinyarada oo ahaa arday qaarkoodna dhigto Jaamacada qaarna dhameeyey ayaa fasax u tagay dalka Kenya xiligii ay colaadu ka jirtay gabalka Ogaden.
Dhalinyaradan ayaa magaalada Nairobi kula kulmay dad ka yimid xerada Qaxootiga ee dhadhaaab, waxayna doorteen in booqasho ku tagaan Dhadhaab, booqashadaas ayaa ku dhalisay in ay bilaabaan shaqadan ay maanta hayaan.
Sida teleshiinka oo toos ahaa laga daawaday, waxay dhalinyaradu kula kulmeen magaalada Jijiga 500 oo caruur agoon ah oo waalidkood ku dhinteen dagaaldii ka socday gabalka Ogaden.
Waxaa kale oo ay gabalka Nogob magaalo madaxdiisa Fiiq ay kula kulmeen 350 caruur ah oo iyana agoon ah. Degmada Shekosh ee gabalka Qoraxeey 150 caruura oo agoon ah iyo degmada Qabribayax ee gabalka Banka Jijiga oo iyadana ay xero ku jiraan 150 caruur agoon ah.
Caruurta ku jirta xerooyinkaas waxaa masuuliyadooda gacanta ku haya dawlada degaanka Somalida Ethiopia, mana jirto cid kale oo gacan ka gaysata noloshooda iyo waxbarashadooda. Dhalinyaradu waxay haatan ka qayb qaadanayaan arimo samafal oo ay kaga qayb qaadan doonaan korinta caruurtan aan waalidka lahayn [orphan].
Waxaa kale oo ay dhalinyartu tv ka sheegeen in ay jiraan dad kale oo aad u badan oo ay saameeyeen colaadii iyo dagaaladii ka jiray gabalka Ogaden. Dadkaas oo qaar badan oo ka mid ah ay laxaad la,aan yihiin wax shaqo ahna ayna haysanini. Ma jiraan wax haydo samofala oo gacan siiyaa dadkaas ay waxyeeladu ka soo gaadhay dagaaladii gabalka ka jiray.
Ma sahlana waxayeelada uu dhaliyey dagaal socday 16 sano oo xidhiidh ah, nabadii ka dhacday degaanka inta laga warhayo ma jiraan dawlad, ururo ama UN-ta wax ka socda oo ka qayb qaatay gacan qabashada dadkii shacabka ahaa ee ay waxyeeladu ka soo gaadhay dagaaldii ka dhacay gabalka Ogaden.
Dhalinyarada Freedom of Peace, waxay balan qaadeen in ay gacan ka gaysan doonaan waxtarka dadkaas iyo horumarintooda. Dhalinyaradu waxay sheegeen in ay gaadhsiin doonaan aduunka wax u qabashada dadka tabaalaysan ee ku nool gabalka Ogaden.
Dhalinyaradu waxay sheegeen in dawlada Ethiopia iyo dawlada degaankuba ay wadaan dadaal dheeri ah, laakiin ayna suurto gal ahayn in ay qabtaan kuli baahida ka jirta gabalka Ogaden.
Dadweynaha u dhashay gabalka Ogaden meel kasta oo ay joogaanba waxa mudan in ay gacan siiyaan dhalinyarada Freedom of Peace oo runtii leh karti ay wax ugu qabtaan dadweynaha gabalka Ogaden.
It’s Time to Rebuild the Somali Region of Ethiopia by the Pocket of the Diaspora